Nagarik Shukrabar - लाजनीति
शनिबार, ०२ असोज २०७८, ०३ : ३९
धृतराष्ट्रकाे बाटाेमा उपराष्ट्रपति !!
छोराको एकपछि अर्को बदमासी सार्वजनिक भइरहँदा उपराष्ट्रपति भने अचम्मसँग मौन छन् । धृतराष्ट्रझैँ बदमासी नदेखे जस्तै गरेर बसेका छन् उनी छाेराकाे बदमासीप्रति ।
प्रधानमन्त्रीको सुपर तुक्का
हँसीमजाकका प्रिय हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उखान तुक्काका त खानी नै हुन् । सत्ताबाहिर रहँदा सत्तामा रहेको दललाई तुक्काले हानीहानी घाइते नै बनाइदिन्थे । सत्ताधारी बनेपछि पनि उनको तुक्का यात्राको क्रम रोकिएको छैन, बरु तीव्र रफ्तारमा जारी नै देखिन्छ ।
कुप्रचारमा अब्बल कमरेड
मन्त्री बनाउँछु भनेर लोप्पा ख्वाएपछि एक समय पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रतिपक्षझैँ व्यवहार गर्दै आएका याेगेश भट्टराईले त्यस्तो के आश्वासन पाए र यसरी सत्याग्रहीको चिरहरणमा खुलेआम सक्रिय भए ?
कांग्रेस नेता चोर्दा परिवारमा टेन्सन
चितवनका पुराना कांग्रेसी तीर्थराज भुषालले पार्टी छाडेकोमा कांग्रेसका नेता त मौन नै छन् तर घरकी श्रीमतीदेखि नाती र भाञ्जाभाञ्जीसम्मले विज्ञप्ति नै निकालेर अवसरवादी भएको आरोपै लगाइदिए ।
त्यो आफ्टर सक थियो वाइडबडीको भुक्तानीको समयमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवा र पर्यटन मन्त्री रहेको तथ्य । त्यही आधारमा टेकेर जितेन्द्र देवलाई नैतिकताको कठघरामा उभ्याएको थियो उपसमितिले । तर, त्यो मितिमा देवको साटो देउवा पो रहेछन् पर्यटन मन्त्रीसमेत । भ्रष्टाचारमा मुछिएर रन्थनिएका देवले पनि यो सुइँको पाएपछि विज्ञप्ति निकालेर उपसमितिलाई ‘तथ्य नै नहेरी मानमर्दन गरेको’ भन्दै विज्ञप्तिमार्फत् झपारे ।
मोहरा कि महरा
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को आधारमा राज्यमा सुशासन कायम हुने विश्वास गरिन्छ तर पछिल्ला दुई घटनाले व्यवस्थापिका कार्यपालिकाका अगाडि पूरै लम्पसार परेको देखियो । यसको मोहरा बने सभामुख महरा ।
पहिला भुक्तानी दिएको देखिए राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भन्थे अब भ्रष्टाचार प्रमाणित भए सन्यास लिन्छु भन्न थालेका छन् । सरकार वचाउमा उत्रिसक्यो । दुई तिहाइको सरकार छ, राजनीतिक संरक्षणमा रवीन्द्र अधिकारीले उन्मुक्ति पनि पाउँलान् । तर राजनीतिमा वाइड रहेको उनको छवी वाइड बडी प्रकरणले न्यारो भने बनाइदियो
‘कार्यकर्ता’ हराएका गगन
नेपाली कांग्रेसको सानातिना कार्यक्रम भए पनि त्यसको केन्द्रमा हुन्थे गगन थापा । पार्टी नेता र नेतृत्वबारे चर्का बहस छेड्थे उनी । पार्टी नेतृत्वलाई आच्छुआच्छु पार्थे तर्कमार्फत तर अचम्म, आधा दशकपछि बसेको पार्टीको महासमिति बैठकमा यस्तो दृश्य देखिएन ।
उपराष्ट्रपतिको साहस,बामदेवको बदला
गत साता उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले निक्कै उदार र साहसिक काम गरे । तर उनका छोरा, उनी निकटका शुभेच्छुक बाहेक अन्यले उनको यो साहसिक कामलाई फैलाउन र किर्ति फिजाउन कुनै योगदान दिएनन् ।